အလှူအတန်းတွေလုပ်ရင်း ပီတိဖြစ်နေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ | Duwun
တကယ်ကို ကြည်နူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
စန္ဒီမြင့်လွင် တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ နှစ်သစ်ကူး အလှူအတန်းတွေ လုပ်ရင်း ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း စန္ဒီမြင့်လွင်က ပထမဆုံး ရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရပြီလို့ ဆိုပါတယ်.
ကိုသီဟလွင်နဲ့ အဆိုတော် စန္ဒီမြင့်လွင် တို့ ဇနီးမောင်နှံက နှစ်သစ်ကူး အလှူကို ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ က ရွှေမြိုင်သီရိ သီလရှင် စာသင်တိုက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်. သူတို့ရဲ့ အလှူကိုတော့ မိသားစု ဝင်တွေနဲ့ အတူ ဆွေမျိုး. မိတ်ဆွေတွေက တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်.
'' နှစ်ဦးအလှူ '' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲကျော်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် စန္ဒီမြင့်လွင် တို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အလှူကို တက်ရောက်လာတဲ့ ညီမငယ် စိုးပြည့်သဇင်ကလည်း အခုလို ဆုတောင်းစကားပြောပြထားပါသေးတယ်. '' မဒီရဲ့နှစ်ဦးအလှူလေးမှာသ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေမဒီ....မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့...ဘေဘီလေးနဲ့အတူလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာတွေမှန်သမျှပြည့်ဝပါစေ'' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်.
စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ အလှူအတန်းတွေ လုပ်ရင်း ပီတိဖြစ်နေကြတာကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေ မှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်. စန္ဒီမြင့်လွင်ဟာ အခုဆိုရင် ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရပြီဖြစ်ပါတယ်.အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် အချိန်မှာ ရင်သွေးရခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင် စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဟာ (၂)လခွဲရှိလို့နေပါပြီတဲ့။
“ရင်သွေးလေး ရပြီဆိုတော့ ပျော်တယ်။ ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးပြီး ရင်ခုန်နေတယ်။ ပျော်တယ်။ နဂိုကတည်းက ကလေးတစ်ယောက် လိုချင်နေတာဆိုတော့ အတော်ပါပဲ။ နှစ်ပတ်လည်ပြည့်ခါနီးမှာ ရသွားတော့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ သိတာကတော့ ကြာပြီ။ လနုတော့ မပြောဖြစ်သေးတာပါ။ နှစ်လခွဲပဲ ရှိသေးတယ်။ နေသိပ်မကောင်းချင်ဘူး။မူးတယ်။ပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး။ ဘာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချစ်မှာ” လို့ ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်နေ့ကပိုင်ဖြိုးသုတို့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ပြောပြခဲ့တာပါ။
စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ရင်သွေးလေး တစ်ယောက်ပဲ ယူဖို့ စဉ်းစားထားပြီး ကလေးအတွက် Plan လေးတွေစီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း စန္ဒီမြင့်လွင်က သူမလိုချင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးအကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
“ကလေးတစ်ယောက်ပဲ ယူဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်မယ်။ ကလေးလေးကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲဆိုတာလေး Plan လေးရှိတယ်။ အေးချမ်းပြီးတော့ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေး ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မယ်။ အဲ့လိုလေး စိတ်ကူးထားပါတယ်။” လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။